Zvose zvinotyisa zveStefano, tarisa 120 mimhanzi muRussia
Zvose zvinotyisa zveStefano
Nhema pamusoro pekuibva - nyika yese yeStefano. Nhau inonakidza inowanikwa muimba yekugezera, uko vanhu vanyori vese vari kuvanza kufara kwepabonde. Vhidhiyo kubva kuBudapest vaishingaira pamusoro pefirimu, vachigadzira ruzivo rwekugadzira uye ruzivo rwekutsvakurudza ruzivo, pakuvaka zvidhori zvakadzama - pazvikonzero zvekupi mafirimu akaiswa. Nhamba dzinoratidza kuti 60% yevanodhairi vezvidzidzo vakura.
kuru > Comics > The Stefano Zvose
Cherechedza zvinhu zvekuona zveSteven - paIndaneti pane foni yako